MIUI9နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး သင့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကရော ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ?
Home » News » MIUI9နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး သင့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကရော ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ?
In News On March 21, 2017
MIUI ဆိုတာ User-friendly ဖြစ်တယ်၊ လှပတဲ့ UI (User Interface) ရှိတဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ Customized Android ROM တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် MIUI ရဲ့ သိသာတာတခုကတော့ Alpha ROM, Beta ROM နဲ့ Stable ROM ဆိုပြီး အချိန်နှင့်အမျှ Updates တွေထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Up-to-date MIUI ROMs တွေကို MIUI Official Recovery ROM Download Page ဖြစ်တဲ့ MIUI Recovery ROM Download မှာ ကြည့်ရှု၊ သိရှိ၊ ရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
MIUI ROMs တွေကို နှစ်စဉ်ပုံမှန် Updates တွေထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပုံမှန်ထုတ်လုပ်ပေးလာတာ ယခုဆိုရင် MIUI 8 ထိရောက်ရှိလို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ MIUI ROM အသစ်မိတ်ဆက်ခြင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် 16th August မှာ MIUI ရဲ့ Head ဖြစ်တဲ့ Hong Feng မှ မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ ချွင်းချက်အနေနဲ့ ယခုနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ MIUI 8 ROMs ကိုတော့ 10th May 2016 မှာ Mi Max Smartphone နှင့်အတူ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ MIUI ရဲ့ နောက်ထပ် Update ဖြစ်တဲ့ MIUI9နဲ့ပါတ်သတ်လို့ May 2017 လည်းနီးလာပြီဆိုတော့ MIUI9နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေ မကြာခင်သိရဖို့နီးလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ယခု Online မှာထွက်ရှိထားတဲ့ MIUI9နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ဘယ်နေ့ထွက်မယ်ဆိုတာတို့၊ မည်သည့် Xiaomi Devices တွေမှာ MIUI9ရရှိမယ်တို့၊ MIUI9ရဲ့ Features တွေဟာဘာတွေဖြစ်တယ်တို့ စတဲ့ Websites တွေ၊ Facebook Pages တွေ၊ Facebook Groups တွေမှရေးသားချက်တွေဟာ ***Fake Only*** သာဖြစ်ကြပါတယ်။
MIUI9နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး MIUI Development Team အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ Development ပြုလုပ်ဆဲကာလပဲရှိပါသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် MIUI9နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ မည်သည့်သတင်းမှထုတ်ဖော်ပြောကြားလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
Topics: Hong Feng MIUI MIUI 9
Previous Post Xiaomi ဟာ သူ့ရဲ့ Music Library ကိုချဲ့ထွင်ဖို့ရန်အတွက် Warner Music နဲ့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး
Next Post MTK Hexa-core CPU, 6600mAh Battery ထည့်သွင်းအသုံးပြု Mi Pad3ကို Xiaomi 7th Anniversary မှာစတင်ရောင်းချမည်
April 9, 2018 1220CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
April 9, 2018 1950CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
April 9, 2018 1320CommentsBy: Kyaw Hpone Naing